မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-01 > ြငင်းပယ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝတုန်းက dodgeball၊ ဘော်လီဘောနဲ့ဘောလုံးကစားလေ့ရှိတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူကစားနိုင်မီ, ကျနော်တို့နှစ်သင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာအလှည့်ကစားသမားရွေးချယ်ခြင်းအဘယ်သူသည်ဗိုလ်ကြီးနှစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားများကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှမပါ ၀ င်သူများကျန်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည်အလွန်အရှက်ရခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မဖြစ်ခြင်းငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်မလိုလားအပ်သောဖြစ်ခြင်း၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြင်းပယ်ခံရသောလောကတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်ကြုံတွေ့ကြပါပြီ။ ရှက်တတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းချိန်းတွေ့တာကိုငြင်းပယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်အလုပ်လျှောက်ထားသော်လည်းမရခဲ့ပေ။ ဒါမှမဟုတ်မင်းအလုပ်ရခဲ့ပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့အတွေးအမြင်နဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုရယ်ခဲ့တယ်။ သင်၏ဖခင်သည်သင့်မိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်သည်။ မင်းကကလေးဘဝတုန်းကအမြဲတမ်းစော်ကားခံခဲ့ရဖူးလား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကမလုံလောက်ဘူးဆိုတာမင်းကြားခဲ့ရတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲအဖွဲ့သည်အတွက်ရှေးခယျြခံရဖို့နောက်ဆုံးခဲ့ကြသည် သငျသညျအဖွဲ့အပေါ်ကစားရန်ခွင့်ပြုမခံခဲ့ရသည့်အခါကပင်ပိုဆိုးပါတယ်။ ခံစားရခြင်း၏ရှုံးနိမ့်မှုကဘာလဲ။
နက်ရှိုင်းစွာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောငြင်းပယ်ခံရခြင်းသည်မမျှတသောကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကသင့်ကိုမလိုလားအပ်သော၊ သူတို့ကအကောင်းမြင်ခြင်းထက်ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးရိုးရှင်းသောမှတ်ချက်များကိုအကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က“ မင်းရဲ့ဆံပင်ကဒီနေ့မကြည့်ကောင်းဘူး” လို့ပြောရင်မင်းကသူမဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သူမပြောတာကငါ့ဆံပင်တွေကအမြဲတမ်းရယ်နေတာလား။ သင့်ကိုဘယ်သူမှမထီမဲ့မြင်ပြုသော်လည်းသင့်ကိုငြင်းပယ်ခံရသည်ဟုခံစားရစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကဤငြင်းပယ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဤအမြင်သည်သင်၏အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ သင်ကရှုံးနိမ့်သူလို့ထင်ရင်ရှုံးနိမ့်သူလိုပြုမူပါ။
Sie sind nicht allein, wenn Sie diese Ablehnung fühlen. Jesus wurde von denen in seiner Heimatstadt abgelehnt (Matthäus 13,54-58), von vielen seiner Jünger (Johannes 6,66) und von denen, die er zu retten kam (Jesaja 53,3). Noch bevor Jesus unter uns wandelte, wurde Gott abgelehnt. Nach allem, was Gott für die Israeliten getan hatte, wollten sie von einem König und nicht von ihm regiert werden (1. ဆမ် 10,19). Ablehnung ist für Gott nichts Neues.
Gott hat uns zur Annahme und nicht zur Ablehnung geschaffen. Deshalb lehnt er uns nie ab. Wir können Gott ablehnen, aber er wird uns nicht ablehnen. Jesus liebt uns so sehr, dass er für uns gestorben ist, bevor wir uns für ihn entschieden haben (Römer 5,8). «Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde» (Johannes 3,17). «Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen» (Hebräer 13,5).
Die gute Nachricht ist die, dass Gott Sie auserwählt hat, in seinem Team und sogar Kind in seiner Familie zu sein. «Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater» (Galater 4,5-7). Es spielt keine Rolle, welche Fähigkeiten Sie haben, denn wenn Sie Jesus in Ihnen leben lassen, wird er sich um alles kümmern. Sie sind ein Gewinner, kein Verlierer! Alles, was Sie tun sollten, ist, diese Wahrheit zu akzeptieren, aufzutauchen und bereit zu sein, am Spiel des Lebens teilzunehmen. Sie sind ein wertvolles Mitglied des Siegerteams.